I-Infographic: I-7 ye-imeyile yoNtengiso kwiNtengiso ekhulayo kwi-2022 | Martech Zone
Ngelixa itekhnoloji ye-imeyile ingenalo ulutsha oluninzi malunga noyilo kunye nokuhanjiswa, izicwangciso zentengiso ye-imeyile ziyavela ngendlela esifumana ngayo ingqalelo yababhalisi bethu, sibabonelele ngexabiso, kwaye sibaqhubele ekubeni benze ishishini nathi.
IiNtengiso ze-imeyile eziKhuphisayo
Uhlalutyo kunye neenkcukacha zaveliswa ngu Omnisend kwaye zibandakanya:
Umxholo oveliswe ngumsebenzisi (ugc) -Ngelixa iibhrendi zikuthanda ukupolisha umxholo wazo, ayisoloko inxibelelana nabaphulaphuli ekujoliswe kubo. Kubandakanya ubungqina, uphononongo, okanye izithuba zemidiya yoluntu ekwabelwana ngazo kunye nababhalisi bakho zibonelela ngenqanaba elikhulu lokwenyani.
I-Hyper-Segmentation kunye noBukho -Ibhetshi yakudala kunye nesitayile sokuqhuma kokuthumela iileta zeendaba kuye kwalawula intengiso ye-imeyile amashumi eminyaka, kodwa ababhalisile bayadinwa yimiyalezo engahambelaniyo nabo. Ukuhambisa iihambo ezizenzekelayo ezenzelwe umntu kakhulu kwaye zahlulwe kuqhuba uthethathethwano olungcono kakhulu ngoku.
Unxibelelwano lweOmnichaneli -Ii-inbhoks zethu zipakishwe... ngoko ke iibhrendi zongeza imiyalezo ejoliswe kwizaziso zeselfowuni, imiyalezo ebhaliweyo, kunye nokubekwa kwentengiso okuguquguqukayo ukuhambisa ithemba kwiihambo zabo zabathengi.
INyaniso eyandisiweyo / iNyaniso ebonakalayo -Ininzi yokuzibandakanya kwe-imeyile iyenzeka kwizixhobo eziphathwayo kule mihla. Oko kunika ithuba lokutyhala ababhalisile ukuba bacofe ngaphandle komthungo ukuya kwitekhnoloji ehamba phambili yeselfowuni ebandakanya inyani eyandisiweyo (AR) kunye nenyani yenyani (VR).
Ukudibana -Amava eDijithali amkelwa ziibrendi kuba ayinto emanzi kunye namava endalo anceda abatyeleli ukuba baziqondise kwaye benze amava abo omsebenzisi. I-imeyile yindawo yokuqala yendalo kula mava, ukuqalisa umbuzo wokuqala obamba impendulo kunye namacandelo enyathelo elilandelayo kumava.
UkuSebenza kweSoftware Iimveliso ezininzi zisayila i-imeyile yedesktop - amathuba alahlekileyo esikrini esincinci kunye nokukwazi ukufunda ngokulula kunye nokusebenzisana nee-imeyile. Ukuthatha ixesha elongezelelweyo ukufaka amacandelo eselula-kuphela kwe-imeyile yakho elungiselelwe iqonga le-imeyile ephathwayo ibalulekile ekuqhubeni uthethathethwano.
Ukubaluleka koBucala beDatha -I-Apple ilahle i-iOS ye-15 ye-imeyile ye-App ephelisa iiplatifomu zokuthengisa i-imeyile ekubambeni isiganeko esivulekileyo se-imeyile nge-pixel yokulandelela. Ngokuncipha kokulandela i-cookies, abathengisi kufuneka basebenzise umkhondo womkhankaso ongcono kakhulu kwii-URLs ukunceda ababhalisile ngaphandle kokwaphula imigaqo okanye ukugqithisela iinkxalabo zabucala.
Nantsi i-infographic epheleleyo eyilwe liqela kuYilo lweWebhusayithi eBomvu ephuhlise le infographic imangalisayo esekwe kwidatha ye-Omnisend: IiNtengiso ezi-7 zeNtengiso ye-imeyile Bonke abanini bamashishini kunye nabarhwebi kufuneka bazi ngo-2022.
Ukubhengezwa: Ndililungu le Omnisend kwaye ndisebenzisa ikhonkco lokudibana kweli nqaku.
tags: apple yokulandelela emailNyaniso eyongeziweyoukuziphathazobumfihlo idathaamava edijithaliemailIqhutywa ngumsithoUkwahlulahlulahlukaNziswanoiOSiOS 15imeyile ephathekayoUkulungiswa kwefowuniomnichannelonke amagamaNgokwezifisouyilo olubomvu lwewebhusayithii-imeyile ebangelaumxholo owenziwe ngumsebenzisindiphila